Momba anay | Hangzhou Zkong Networks Co., Ltd.
Zkong Networkdia mpanavao sy mpamily vahaolana an'ny Cloud Electronic Shelf Label (ESL), manolotra ireo mpivarotra amidy miaraka amina vokatra azo antoka sy lafo vidy eran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny fanampian'ny marika Zkong's Cloud Electronic talantalana (ESL) sy ny teknolojia IoT, ny mpivarotra dia afaka mifehy mora foana ary mitondra ny varotra sy ny fampiroboroboana amin'ny varotra amin'ny hafainganam-pandeha, hakingana ary tsy miovaova.
Ny ESLs anay dia vonona hampiasaina amin'ny teknolojia Bluetooth sy NFC, fampisehoana sary feno ary loko telo. Afa-tsy ny fampisehoana antsipirian'ny vokatra toy ny vidiny, ny tahiry ary ny fampiroboroboana dia azontsika atao ihany koa ny manamboatra ireo marika ho an'ny fampisehoana vaovao sy endrika endrika mila izany.
Miaraka amin'ny haitao mandroso amin'ny firafitry ny rahona sy ny fifandraisana tsy misy tariby, Zkong dia nahatanteraka tsara ireo fitakiana isan-karazany fivarotana an'arivony erak'izao tontolo izao, ary nanampy azy ireo hiaina amin'ny fanambin'ny fahombiazan'ny fiaraha-miasa ambany, ny taha ambony amin'ny vidin'ny vidiny, ny varotra fototra ary ny fiakaran'ny vidin'ny asa. .
Niainga avy amin'ny famokarana laboara elektronika (ESLs), mitombo izahay amin'ny maha-orinasa lehibe manome fitaovana IoT sy sehatra Cloud izay manome vahaolana sy serivisy feno. Ny vahaolana fanavaozana ataonay dia dingana iray lehibe hanovana ny fivarotana manan-tsaina avy amin'ny biriky sy feta nentim-paharazana ka hatrany amin'ny orinasa Omnichannel. Ary mahazo tombony ho an'ny mpivarotra sy ny mpiantsena izahay avy amin'ny traikefa tsara eny amin'ny magazay, izay ahazoan'ny mpiantsena vidiny, fampiroboroboana, haavon'ny tahiry, famerenana ara-tsosialy ary izay vaovao antenain'izy ireo avy amin'ny talantalana, ary ny mpivarotra dia afaka mahazo ny fahitan'ny mpanjifa avy hatrany amin'ny angona lehibe sy manatsara. ny varotra ataon'izy ireo amin'ny fomba mahomby sy mahomby kokoa.
Nandritra ny 15 taona mahery, nahatratra firaketana an-tsokosoko miavaka izahay ary nanompo ny mpanjifa avy amin'ny firenena 35. Miara-miasa akaiky amin'ireo marika marobe mpivarotra lehibe indrindra eto an-tany izahay, toy ny Alibaba Group, Lenovo Group, Vodfone, China Mobile, Coop Group, E-ink, Qualcomm, ary maro hafa.
Ny fomba fijerinay dia ny mampihatra mari-pamantarana Cloud Electronic talantalana (ESL) isaky ny Smart Store. Ny iraka ataontsika dia ny manitatra tamba-jotra ara-barotra mahomby kokoa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Miarahaba ireo mpiara-miombon'antoka eran'izao tontolo izao izahay mba hametraka fiaraha-miasa lalina, ary vonona izahay hampiroborobo ny varotrao ary hanatsara ny sisin-tany amin'ny vahaolana mandroso.
Avelao ireo fivarotana kaoperativa 3000 ho sahy handao ny marika vidin'ny taratasy nentim-paharazana ary hiresaka mivantana amin'ny talantalana.